Easy Way naghachi ehichapụ Data si Samsung Cell Phone
Onye ọ bụla nwere ha ọcha ekwentị mgbe-ala otu n'ime ọnwa isii. All enweghị isi ihe oyiyi, videos, kọntaktị, adreesị email, ederede ozi, songs mkpa ga-ehichapụ na-eme ka ohere maka nke ọhụrụ. Ma, mgbe ụfọdụ, ihe kacha mkpa oge nke ndụ gị n'ụdị oyiyi ma ọ bụ vidiyo na-na-ehichapụ na-achọghị na data, na nke a bụ mgbe ị kwesịrị na zuru okè ngwọta-enyere gị aka naghachi ehichapụ ọdịnaya. E nwere ọtụtụ ụzọ ime na, ma mbụ, ka na-a anya na atọ n'ime ihe ndị kasị ihe n'azụ na ọnwụ nke data na Samsung igwe.
• Clean-elu ngwa nwere ike goof-elu
E nwere ọtụtụ dị ọcha na-elu-ngwa ọdịnala na-enye ọcha na-achọghị faịlụ na cache si gị ntị. Ndị a ngwa dị mma, na ọtụtụ ijeri ndị mmadụ gburugburu okwu na-eji ha na-eme ka ụfọdụ mmezi ohere na ha na ekwentị mkpanaaka. Ma mgbe ụfọdụ, ndị a ngwa ọdịnala nwere ike na-elu-ihichapụ ọjọọ faịlụ. Nke a nwere ike ụda weird, ma ọbụna mgbochi nje ngwọta nwere ike ihichapụ-abụghị emerụ photos, vidio, na ndị ọzọ faịlụ.
• Data ehichapụ mgbe na-ebufe ọdịnaya site na PC
Onye ọ bụla na-ejikọ ya ma ọ bụ ya smart ekwentị na PC na-iji tinye ma ọ bụ hichapụ faịlụ. Mgbe ụfọdụ, gị na kọmputa nwere ike ihichapụ niile data na ekwentị gị na ebe nchekwa (SD) kaadị naanị n'ihi na unu accidently metụrụ "format".
Anti-virus arụnyere na gị na PC nwekwara ike accidently ihichapụ-abụghị rụrụ arụ faịlụ site na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba PC mgbe ị itinye ngwaọrụ gị ka gị na kọmputa na eriri USB maka data nyefe.
• Data ehichapụ ezighị site na ekwentị gị
Gịnị ga-abụ mmeghachi omume gị ma ọ bụrụ na gị na nwa ewu ga-emepe gị Galaxy si gallery, clicks na "họrọ ihe niile" na nanị deletes gị niile foto? Nke a ga-maa mmenyenjo gị, ma ọ bụghị nanị gị. E nwere ọtụtụ ndị si n'ebe ndị na-ezighị ihichapụ foto, videos, na akwụkwọ ha na ekwentị, na-aghọta ha mkpa mgbe e mesịrị.
Part 1: Olee naghachi ehichapụ faịlụ site Samsung color
Mgbe ọ bụla ị ihichapụ ihe si gị gam akporo ngwaọrụ, nchegbu faịlụ adịghị ehichapụ ozugbo. Ọ na-anọgide na ekwentị, na a na nanị dochie na data na ị tinye ozugbo mgbe ihichapụ nchegbu faịlụ. Iji-etinye ya na okwu dị mfe, ị nwere ike naghachi gị ehichapụ data si gam akporo ngwaọrụ ruo mgbe ị adịghị tinye ọ bụla ọzọ data na ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ị ghọta na i ehichapụ ihe n'amaghị ama, ihe niile ị na chọrọ ime na-kwụsị iji ekwentị gị, na jikọọ na ya na software na ike naputa a data.
Dị ka e kwuru na mbụ, e nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala na ike ime ọrụ. Ma, Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) guzo pụọ n'ebe ìgwè mmadụ. The software bụ dakọtara na ihe karịrị 2000 ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na ẹkedori Wondershare Dr.Fone for Android
Wụnye Wondershare Dr. Fone na kọmputa gị. Mgbe ahụ, jikọọ gị Android ngwaọrụ gị PC eji eriri USB.
Mgbe ejikọta ngwaọrụ gị gị PC, ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba PC nwere ike ịgụ gị debug USB. Soro usoro na-eme otu ihe ahụ.
Nzọụkwụ 2. Họrọ lekwasịrị faịlụ ka iṅomi
Mgbe debugging USB, Dr. Fone ga-amata na ngwaọrụ gị. Mgbe ọzọ na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba ga-akpali gị maka Superuser arịrịọ ikike na-ekwe ka Dr. Fone jikọọ. Dị nnọọ pịa "Kwe Ka".
Mgbe ahụ, Dr. Fone ga-egosi na-esote ihuenyo na-arịọ gị ka ịhọrọ ụdị data ma ọ bụ faịlụ ka iṅomi na-agbake. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị naghachi photos, pịa na otu nhọrọ. Na-esote na ihuenyo, họrọ nhọrọ "ehichapụ faịlụ".
Nzọụkwụ 3. Naghachi ehichapụ ọdịnaya site Samsung igwe
N'ime minit ole na ole, software ga-egosi niile ehichapụ photos. All na ị chọrọ ime bụ pịa n'okpuru photos na ị chọrọ iji naghachi na pịa na naghachi taabụ. Ị photos ga-azụ ebe ị chọrọ ha ka ha bụrụ, na ekwentị gị gallery!
Atụmatụ: Ọ a ọma oge ịzụta Samsung Galaxy S6 Edge ugbu a?
S6 Edge si sọrọ curved ngosi, otutu na obi ike imewe ka amanye niile Samsung na-akatọ na-ekweta na S6 Edge nwere brawn, ụbụrụ, na ịma mma na-na iPhone na ndị ọzọ na Android ngwaọrụ.
Imewe bụ otú pụrụ iche na onye ọrụ na-ele oké mgbe ejide ya na ya / ya n'aka. S6 Edge bụ nkecha na ebughibu, ọ ga-apụ n'anya gị n'akpa uwe, n'etiti ndị ọzọ stof, na ị gaghị na-nile na-na keukwu n'akpa uwe mmetụta.
Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti 128 GB na 64 GB variant, ma-agba ọsọ na 64-bit octa isi processor, na nwere 3GB Ram. Ya 5.1-anụ ọhịa ngosi dị mma iji comfortably Watch ọkacha mmasị gị na-egosi na YouTube. Ọtụtụ ihe, dị ka mbụ ọrụ reviews, ozugbo ebubo, ngwaọrụ nwere ike na-arụ ọrụ maka otu ụbọchị na-n'agbanyeghị arọ ojiji.
E nwere nanị ole na ole na-ezighị ezi akụkụ nke S6 Edge. Ngwaọrụ adịghị enye expandable nchekwa atụmatụ na swappable batrị ka S6 ọkọlọtọ. Mkpisiaka mmetụta yiri ka ọzọ ndakpọ olileanya.
N'ozuzu, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ndị kasị mma Android handset, nke a pụrụ ịbụ nri oge ka ịgbanwee gaa na SE6 Edge. Ọ ka nwetara niile mgbọ na Samsung pụrụ inye.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga n'ihi na a nkwekọrịta ekwentị, ị kwesịrị ị na njikere iji kwụọ ụgwọ gburugburu $ 100 karịa ihe ị kwụọ ụgwọ maka S6. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga n'ihi na ekwentị na-enweghị nkwekọrịta, ị kwesịrị ị na njikere iji kwụọ ụgwọ n'etiti $ 100 na $ 130 karịa ihe ị kwụọ ụgwọ maka S6.
> Resource> Samsung> Kedu bụ ụzọ kasị mma na-agbake ehichapụ ọdịnaya site Samsung ntị?